Mahatonga fanontaniana maro ao Bangladesh ny fanafihana tamin’ny baomba ny fivorian’ny Shiita tao Dhaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Oktobra 2015 9:26 GMT
Polisy miambina ny toerana nisian'ny fanafihana tamin'ny alalan'ny baomba tao Hussaini Dalan, toerana masina ho an'ny Miozolomana Shiita, ao Dhaka ny marainan'ny 24 Oktobra. Sary avy amin'i Farid Ahmed. Copyright Demotix (24/10/2015)
Lasa toe-javatra miha mateti-pitranga sy misesisesy ao Pakistan sy ny firenenkafa vitsivitsy ny herisetra ara-pivavahana manjo ny Shiita vitsy an'isa. Hatramin'izao fotoana izao dia mbola tsy tratran'ity faharatsiana ity i Bangladesh, satria mirindra tsara ny Shiita sy ny Sonita ao amin'ny firenena efa ampolony taona maro izao.
Saingy noho ny eksitremisma lasa zava-piseho misesisesy manerantany, dia miatrika ity zava-mangotraka ity ihany koa i Bangladesh. Ny marainan'ny Asabotsy 24 oktobra nisy baomba nipoaka nandritra ny fiangonan'ny Shiita betsabetsaka ary tsy mbola nitranga mihitsy izany teo aloha tao an-drenivohitra Dhaka tao amin'ny Hussaini Dalan izay nahafaty zazalahy 14 taona sy naharatra olona manakaiky ny 60. Hussaini Dalan no toeram-piangonana ara-pivavahan'ny Shiita mandritra ny volana Muharram.
Ny fipoahana voalohany dia re tokony ho tamin'ny iray ora sy sasany maraina raha teo am-pikarakarana ny diabe ara-pivavahana fanaony antsoina hoe Taziah ny vondrom-piarahamonina Shiita. Dimy minitra taorian'izany ia nisy baomba roa hafa nifandimby nipoaka inray. Nisy baomba roa hafa tsy nipoaka hita teny amin'ny manodidina hita taty aoriana.
Nanambara ny polisy fa hisy komity ahitana olona telo hisahana ny famotorana amin'ity toe-javatra ity. Araka ny mpitondratenin'ny antoko mitondra sy ny police, dia tetika hanakorontanana sy firenena sy hanaratsiana ny endriny izao fanafihana izao.
Nitodika tao amin'ny media sosialy ny Bangladeshis haneho ny fahatafintohinany.
Nanoratra ny mpisera Facebook iray tao an-toerana Shah Jalal Sagar :
Tafintohina tamin'ny fanafihana tsy misy indrafo tamin'ny fiangonan'ny Shiita Ashura teo ivelan'ny Dhaka taloha aho, ary manolotra ny fiaraha-miory amin'ireo lasibatra sy ny fianakaviany. Efa nanana fahazarana ara-pivavahana nifampizaka sy niaraka amim-pirindrana hatry ny ela i Bangladesh.
Nisioka ny mpanao gazety Mahfuz Sadique:
NIlaza ireo Mpitarika ara-pivavahana Shiita ao Dhaka fa tsy nandeha irery fa ao anatin'ny fanafihana atao manerantany io fanafihana tamin'ny Asabotsy io. (Tsy mba re tao Bangaldesh izany fisarahana teo amin'ny Shiita sy ny Sonita izany)
Na dia teo aza ny fanafihana nitranga tao Hussaini Dalan dia an'arivony ireo Bangladeshi Shiita Miozolomana no nandray anjara tamin'ny diabe ara-pivavahana Asura fanao isan-taona ao Dhaka tamin'ny Asabotsy. Sary avy amin'i Fahad Kaizer. Copyright Demotix (24/10/2015)
Araka ny vondrom-pitsikilovana SITE miorina ao Etazonia, dia ny vondrona mitam-piadian'ny Fanjakana Islamika no nilaza tena ho tompon'andraikitra tamin'ny fanapoahana baomba tao Hussaini Dalan.
Nisioka i Rita Katz, Talen'ny vondrom-pitsikilovana SITE :
1) Nilaza ho nanao ny fipoahana tao Dhaka ny ISIS: “Nanapoaka zavatra mora mirefotra maro ny miaramilan'ny Kalifàn'i Banglades
2) Io no bemidina fahatelo nolazain'ny ISIS ao Bangaldesh ho nataony tao anatin'ny iray volana.
Nisy tranonkala Bengali iray mpanohana ny IS ihany koa namoaka ity hafatra fanohanana ny fanafihana ity:
Pikantsary tamin'ny habaka Tamkin
Vaovao Farany: Fanafihana tamiin'ny alalan'ny baomba tao amin'ny tempolin'ny Rafida Mushriqs:
Ao amin'ny fahasoavan'i Allah ny tafiky ny Khilafah dia nahomby tamin'ny fanafihana natao tamin'ny rafida mushriqs Shiita. Manodidina ny zato teo ho eo no maty na naratra rehefa napoaka ireo I.E.D.s (fitaovana namboarina hirefotra) ary ho an'i Allah ny voninahitra rehetra.
Notondroin'ny mpisera Noor Uddin fa tsy mahazaka izany famonoana olona tsy manantsiny izany ny Islamo:
Tsy azo ekena aminay izay nanao iny zavatra iny. Fahotana lehibe ao amin'ny Islamo izany famonoana olona tsy manantsiny izany, na iza na iza manao izany dia tsy hankany amin'ny ‘Jannah’ na oviana na oviana araka ny nomarihan'ny ‘Korany Masina’
Tezitra tamin'ny fahanginan'ny sarambabem-bahoaka i Tahsina Arshad Ahmed :
Tsy azo afenina fa miha mahazo vahana ny eksitremisma ao Bangladesh. Ny mahagaga ahy dia zara raha naheno ity asam-pampihorohoroana ity aho androany, afa-tsy tamin'ny namana iray. Ka tsy mendrika andaniana fotoana ve ny fanandratam-peo hanoherana izao tsy rariny atao amin'ny Shiita izao?
Ali Riaz nanoratra tao amin'ny bilaogy Kathakata :
Tokony hojerena amin'ny toe-draharaha politika misy amin'izao fotoana izao sy ireo fanafihana nahitam-boina nitranga tao anatin'ny volana vitsivitsy ity fanafihana ity. Miditra an-tsehatra amin'izany ny fanjavozavoana ara-politika, tsy fahamarinan-toerana sy fikorotandrotana, fahapotehan'ny lalàna sy ny filaminana, fifehezana ny fahalalam-pitenenana, ny tsy fahaizan'ny manampahefana mampiasa ny fahefana araka ny tokony ho izy, ny tsy fisian'ny fanoherana ara-politika afa-miasa, ny fitomboan'ny fahefan'ireo fikambanana eksitremista ao an-toerana ary ny famonoana vao haingana vahiny anankiroa. Ny fanadihadiana ireo rehetra ireo no eritreretiko fa fanambarana vava ady vaovao – herisetra ara-pivavahana – lalambe hafa mankany amin'ny eksitremisma ara-pivavahana io fanafihana io.